India Tourist Visa | The Visa mpizahatany amin'ny Internet ho an'ny India
Mangataha Visa eTourist India
Ireo mpandeha any India izay mikasa hijery / miala voly, hihaona amin'ny namana sy havana na Program Yoga mandritra ny fotoana fohy dia mila mangataka India Tourist Visa amin'ny endrika elektronika, fantatra ihany koa amin'ny hoe eTourist Visa for India.
Visa mpizahatany ho an'i India dia azon'ireo mpitsidika mikasa ny hitsidika an'i India mandritra ny 180 andro isaky ny mandeha.
Ny mpitsangatsangana any India dia afaka mahazo fangatahana Visa Indiana amin'ny Internet amin'ity tranokala ity nefa tsy mitsidika ny masoivoho indianina. Ny tanjon'ilay dia dia tsy mila manao varotra amin'ny lafiny voajanahary.
Ity mpitsangatsangana Visa Indiana ity dia tsy mitaky tombo-kase ara-batana amin'ny pasipaoro. Ireo izay mangataka ny Visa mpizahatany Indiana eto amin'ity tranonkala ity dia homena kopia PDF an'ny fizahantany Indiana izay alefa amin'ny alàlan'ny mailaka. Na ny kopy malefaka an'ny Visa mpizahatany Visa na ny fanaovana pirinty taratasy dia takiana alohan'ny hidirana an'habakabaka / sidina any India. Ny Visa izay atolotra ho an'ny mpandeha dia voarakitra ao amin'ny rafitry ny solosaina ary tsy mitaky tombo-kase amin'ny pasipaoro na mpiasan'ny pasipaoro any amin'ny biraon'ny Visa Indiana.
Inona no azon'ny mpizahatany Indiana Visa?
Ny fizahantany India Visa na Visa eTourist dia azo ampiasaina amin'ireto tanjona manaraka ireto:
Ity Visa ity dia azo jerena amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny eVisa India amin'ny alàlan'ity tranokala ity. Amporisihina ny mpampiasa hampihatra an-tserasera an'ity Internet Visa an-tserasera ity fa tsy fitsidihana ny masoivoho Indiana na Vaomieran'ny Indiana ambony ho an'ny fahazoana, ny filaminana ary ny fiarovana.
Hafiriana no ahafahanao mijanona ao India miaraka amin'ny eTourist Visa?
Misy safidy maromaro amin'ity Visa Indian Tourist ity ho an'ny mpitsidika raha jerena ny faharetany ankehitriny. Izy io dia misy amin'ny fe-potoana 3 amin'ny 2020:
30 Andro: manan-kery mandritra ny 30 andro manomboka amin'ny fidirana ao India ary manan-kery ny fidirana indroa.
1 Taona: Diso mandritra ny 365 andro manomboka amin'ny famoahana ny eTA ary Visa fidirana maro.
5 Taona: manan-kery mandritra ny 5 taona manomboka amin'ny famoahana ny eTA ary fidirana betsaka ny Visa.
Fahamarinana 30 andro i India Visa dia misavoritaka sasany. Azonao atao ny mamaky ny fanazavan'ny mpitsidika Visa ho an'ny 30 andro.
Fanamarihana: Nisy 60 andro Visa tany India efa nisy talohan'ny 2020, saingy efa nopotsirina hatramin'ny farany izy io.
Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny Visa mpizahatany India?
Ny mpikaroka Visa dia mitaky ireo antontan-taratasy etsy ambany.
Pejy nandrava loko pejy voalohany (biografika) ny pasipaorony ankehitriny.
Saripika miloko pasipaoro vao haingana.
Ny fahazoan-dàlana pasipaoro 6 volana amin'ny fotoana fidirana any India.
Inona avy no tombontsoany sy toetran'ny India mpizahatany Visa?
Ireto manaraka ireto dia ny tombotsoan'ny Indiana mpizahatany Visa:
Ny 30 Andro mpizahatany Visa dia mamela ny fidirana indroa.
1 taona sy 5 taona ny turista Visa dia mamela ny fidirana maro.
Afaka miditra ao India avy amin'ny seranam-piaramanidina 28 sy seranan-tsambo 5 ireo tompona. Jereo eto ny lisitra feno.
Ireo tompon-tany any India Visa mpizaha tany dia afaka mivoaka ny Karana amin'ny alàlan'ny famoahana fanamarinana momba ny fifindra-monina (ICP) voalaza eto. Jereo eto ny lisitra feno.
Fehiny amin'ny India Vazaha mpizaha tany
Ireto fehintsoratra manaraka ireto dia mihatra amin'ny Vazaha mpizaha tany Indiana:
30 Day Tourist Visa dia Visa indroa miditra ao.
Ny mpitsidika mpitsabo 1 taona sy 5 taona dia manan-kery mandritra ny 180 andro monja amin'ny fijanonana mitohy any India.
izany karazana visa dia tsy azo ovana, tsy azo foanana ary tsy azo foarana.
Azo angatahina ny mpangataka mba hanome porofo momba ny vola ampy hanohanana ny tenany mandritra ny fijanonany any India.
Ny mpangataka dia tsy voatery manana porofo momba ny tapakila sidina na famandrihana hotely amin'ny Visa Indian Tourist.
Ny mpangataka rehetra dia tsy maintsy manana pasipaoro mahazatra, tsy ekena ny karazana pasipaoro diplaomatika.
Tsy azo ekena ny mpitsangatsangana vazaha Indiana noho ny fitsidihana faritra arovana, voaferana sy ny faritanin'ny miaramila.
Raha toa ka lany ny pasipaorony latsaky ny 6 volana taorian'ny daty fidirana, ny fangatahana hanavao ny pasipaoronao. Tokony hanana valiny 6 volana eo amin'ny pasipaoronao ianao.
Na dia tsy mila mitsidika masoivoho indianina na vaomiera ambony indiana aza ianao amin'ny fanondroana ny Visa Indian Tourist, dia mila 2 pejy tsy misy na inona na inona ao amin'ny pasipaoronao mba ahafahan'ny tompon'andraikitra amin'ny fifindra-monina mametraka hajia ho an'ny fiaingana ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Tsy afaka mankany an-dàlana mankany India ianao, avela hiditra amin'ny alàlan'ny Air and Cruise ao amin'ny India Tourist Visa.
Ahoana ny fomba fandoavam-bola ho an'ny mpizaha tany India Visa (eTourist Indian Visa)?
Afaka manao ny mpizahatany fandoavam-bola ho an'ny India Tourist Visa mampiasa fika, karatra debit, carte de crédit na kaonty PayPal.
Ny fepetra takiana amin'ny India Tourist Visa dia:
Pasipaoro iray manan-kery mandritra ny 6 volana manomboka amin'ny daty nahatongavany voalohany tany India.
Famoahana ny carte de debit na carte de crédit na kaonty Paypal amin'ny fandoavam-bola an-tserasera an'ity tranokala ity.
Mangataha azafady amin'ny mpitsangatsangana Vahiny 4-7 andro mialoha ny sidinao.
Mangataha Visa mpizahatany Visa
Disclaimer: Ny Visa Indiana navoakan'ity tranokala ara-barotra ity dia ampiharina mivantana amin'ny Biraon'ny fifindra-monina ao India. Tsy nanendry ny www.indiavisa-online.org mivantana, ankolaka na manokana ny governemantan'i India. Ny sarany matihanina dia voafantina ho an'ny serivisy ataonay ary ny Visa Levy ho an'ireo izay mihatra amin'ity tranokala ity.